नरेन्द्र महतारा | GNN Nepal | Nepali Online News Portal GNN Nepal नरेन्द्र महतारा | GNN Nepal | Nepali Online News Portal
नरेन्द्र महतारा जीएनएन नेपालका संवाददाता हुन् । प
नरेन्द्र महताराका लेखहरु
समाजले महिला र पुरुषलाई समान दृष्टिकोणले हेर्ने कहिले ?
विश्वका धेरै मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि महिला र पुरुष बिच ठुलो बिभेदको अवस्था छ। किन महिलाहरुलाई समाजमा समान स्तर र भरोसा दिइएको छैन ? यो आज सबैको मस्तिस्कमा प्रस्न बनेर खडा भएको छ। भलै हामी २१ औँ शताब्दीमा छौ तर, आफ्नो अधिकारको लागि अझै पनि दौड लगाई रहेकै छौं। बेला…
हिमाली क्षेत्रको तापक्रम घट्दै, जुम्लाको तापक्रम माइनस १ डिग्रीमा झर्‍यो
जुम्ला । जुम्लालगायत हिमाली जिल्लामा चिसो बढेपछि जनवीवन प्रभावित हुन थालेको छ । मौसम फेरिएसँगै एक्कासी तापक्रम घटेको हो । जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय जुम्लाका अनुसार तापक्रम माइनस १ डिग्री झरेको छ । कार्यालयका अनुसार यहाँको अधिकतम तापक्रम भने २० दशमलप १ रहेको छ । चिसो बढेपछि मानिस बाक्लो…
माओवादी केन्द्र ५ दलीय गठबन्धनको सरकारमा सामेल भएको छ । तपाईहरु दुई तिहाई हुँदापनि सरकारमै हुनुहुन्थ्यो । यो सरकार तत्कालीन नेकपाको सरकारभन्दा कसरी फरक हुन्छ ? यो सरकारले संवैधानिक व्यवस्थालाई खल्बल्याउने काम गर्दैन । विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई दिगो बनाइराख्न यो सरकार लाग्ने छ । मुलुकमा विभिन्न समस्याहरुलाई समाधान गर्नुपर्ने…
नयाँ सरकार बनाउनु भएको छ । यो सरकारले गर्ने चाहिँ के हो ? सरकारले गर्ने पहिलो काम कोरोनाबाट प्रभावित जनतालाई खोप दिने हो । ३ करोड नेपालीले खोप नपाउँदासम्म यो सरकार जनतामा लोकप्रिय हुँदैन । विभिन्न विपदहरुबाट देशलाई बचाउनु पनि यो सरकारको काम हो । भिडियो: https://youtu.be/HIW5zHk5b-c तपाईहरु सरकारमा जाने…
नेपालको वर्तमान राजनीतिले फरक मोड लिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको अक्षमताले देशको राजनीति यो अवस्थामा पुगेको हो । सत्ताको भोकमरीमा अलमलिएको नेतृत्व यतिबेला फरकफरक कित्तामा विभाजित छ । विशेषगरी पुष ५ यताका घटनाहरुले नेतृत्व जनताप्रति कति उत्तरदायी र जिम्मेवार छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ ।…
पछिल्लो समय देशको राजनीतिक अवस्था परिवर्तनतिर होमिदै छ । यस्तो अवस्थामा तपाईहरु जो राजतन्त्रको पक्षधर हुनुहुन्छ । कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ यी दृश्यहरु ? गणतन्त्रक प्रमुख नाइके भनौदाहरु आपसमा लडिरहेका छन् । यिनीहरुको लडाइँले हामीलाई कुनै प्रभाव पारेको छैन । हाम्रो माग गणतन्त्र र संघीयताको खारेजीसहित हिन्दु राष्ट्रको पुनस्थापना हो ।…
नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिको वितण्डा फेरि सुरु भएको छ । मानवीय अवस्थिति नै बिल्लीबाठ भएको छ । सम्पूर्ण मानव समुदाय नै त्रासदीपूर्ण अवस्थामा छ । मानवीय संवेदना नै खलबल गर्नेगरी आउने विपत्ति यति उग्र भएको छ कि यसको रोकथाम त्यति सहजै छैन । कोरोना महामारीको विकराल अवस्था कम नहुँदै थप अर्को…
जनता कोरोना महामारीमा छन् । यसबीचमा राजनीतिक घटनाक्रममा व्यापक बदलाव आएको छ । जनताका समस्याहरुभन्दा प्रदीप पौडेलहरुलाई सत्ताको भोक किन ? हामीलाई सत्ताको भोक होइन । सिङगो मानव सभ्यता नै कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कोर्स सुरु गर्नुभयो । उहाँलाई कसैले अविश्वासको प्रस्ताव नै ल्याएको थिएन । यो विपद्को…
जसपा आधिकारिक रुपमै फुटेको हो र ? आधिकारिक रुपमा फुटेको भए निर्वाचन आयोगले फुटेको प्रमाणपत्र दिइहाल्थ्यो नि । प्रधानमन्त्रीसँग बारम्बार भइरहने भेटघाट र छलफलहरुको निष्कर्ष के हो ? हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पहिले हाम्रा माग पूरा गर्नुहोस् भनेर भनिरहेका थियौं । यो राज्यबाट हामी पटकपटक ठगिएका छौं । तपाईहरुले हामीलाई दिएको चेक…
उनको आँखामा वास्तवमै युवाहरुका सपना बोलेका थिए । थापा केही गर्न सक्ने दृढ क्षमता भएको युवा नेता रहेछन् भन्ने मैले थाहा पाए । अहिलेसम्म समृद्धिका नाममा गफ चुट्नेहरुबाट प्रभावित नभएको म उनीसँगको ५ मिनेटको भेटमै प्रभावित भए ।
देश कता जाँदैछ ? आज नेपाली जनता हरेक किसिमले मर्माहत छन् । हरेक नेपालीले कतिबेला के हुन्छ भनेर हातमा कात्रो लिएर बसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई खोपभन्दा निर्वाचनको भारी बोकाउन खोजिरहेका छन् । संविधान र ऐन नै मिचेर आफू जसरी भएपनि सत्तामा टिकिरहने यो हठीले आम नागरिकलाई…
ओलीले अब चाल्ने शक्तिशाली ४ कदमहरु
नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि एकपटक चर्चाको शिखरमा छन् । बारम्बार उखान टुक्काको सहायताबाट जनता हँसाउने कमेडियनको जस उनैले लिएका छन् । त्यति मात्र होइन उनले जनतामा राष्ट्रवादको राम्रै सन्देश दिने गरेका छन् । जनतामाझ आफू अलोकप्रिय भएपछि उनको मास्टर माइन्डले राष्ट्रवाद र उखान…
राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)का अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालेको यो कदमलाई इतिहासकै अक्षम्य अपराधको संज्ञा दिएका छन् । जीएनएन नेपालसँग कुरा गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनीसँग गरिएको कुराकानी विस्तृतमा: प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि राजनीति नै तरंगित बनिरहेको छ ।…
एकजना राजनीतिज्ञले तपाईहरुलाई यसरी गलाएको छ कि तपाईहरुसँग अरु विकल्प नै छैन तपाईहरु यति निरीह किन हुनुभयो ? सबैभन्दा बढी नैतिकता राजनीतिमा हुन्छ । समय र परिस्थितिले अनैतिक मान्छेलाई सत्तामा पुर्यायो । यतिबेला नेपालमा कोभिड संक्रमण अत्याधिक रुपमा बढिरहेको अवस्था छ । यस्तो समयमा जनतालाई उपयुक्त समयमा खोपको व्यवस्था गर्नु…
कोरोना महामारीले जनता ग्रसित हुँदा नेतृत्वलाई सत्ताको जुहारी चलेको छ । कसको पक्षमा बहुमत, को धेरै शक्तिशाली, को धेरै नैतिकवान यावत् कुराहरुमा 'बार्गेनिङ' चलिरहेको छ । यो 'बार्गेनिङ'को चेपुवामा तिनै जनता परेका छन् । सत्ताको बार्गेनिङ कहिलेसम्म चल्छ थाहा छैन । जहिलेसम्म चल्छ जनता कसैको प्राथमिकतामा पर्ने छैनन् । यो…
कोरोना महामारी बढेको बढ्यै छ भनिन्छ यो सत्य हो ? पछिल्लो कोरोना निकै संक्रामक देखिन्छ । बेलायतबाट आएको भेरियन्ट र भारतबाट आएको भेरियन्टका कारण पछिल्लो अवस्था अलि जटिल देखिन्छ । जसले अंकमा वृद्धि भएको छ । भिडियो: https://youtu.be/PcuTqwt5soo भनेपछि संक्रमण निकै भयावह छ ? गत वर्षभन्दा जरुर भयावह छ ।…
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट मागेको विश्वासको मत बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । योसँगै उनको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यही विम लिएको छ । अब तत्कालै नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना निकै न्यून रहेको देखिन्छ । किनभने नयाँ सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत चाहिन्छ । नयाँ सरकारका लागि संसदमा हाल कायम रहेको…
वर्तमान नेपाली राजनीतिक घटनाक्रममा दैनिक उछाल आइरहेको अवस्था छ । यो राजनीति कहाँसम्म जाला ? नेपालका राजनीतिक दलहरु जनताको भावनाभन्दा आफू अनुकूलमा अघि बढिरहेको अवस्था छ । पछिल्लो समय देखिएका राजनीतिक घटनाक्रमहरुले हामी राजनीतिक दलहरुलाई सहजताको वातावरण दिएका छैनन् । यी परिवर्तनहरुको थोरबहुत जिम्मेवारी हामीले पनि लिनुपर्छ । यसले नेपालको…
के हो र यो कोरोना त घरमै बसी जितिन्छ
कोरोना संक्रमणको रोेकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशका विभिन्न जिल्लामा यतिबेला निषेधाज्ञा जारी छ । अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरुबाहेक अन्य कामका लागि बाहिर निस्किन प्रतिबन्ध गरिएको छ । मिडियाबाजीले मानसिक तनाव.. कोरोना महामारी पहिलेभन्दा अहिले धेरै बढेको छ यो सत्य हो । सञ्चार माध्यममा आउने झुठा समाचार र मनोबल गिराउने भिडियोहरुले सर्वसाधारणलाई…
तपाईले नेपालमा गाँजाका सम्भावनाहरु कसरी देख्नुभयो ? गाँजा औषधीय गुण भएको वनस्पति हो । यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले औषधीय गुण भएको वनस्पतिको सूचीमा राखिसकेको अवस्था छ । विश्वका धेरै देशले यसको कानुनी खेती गर्ने, यसको औषधी प्रयोग गर्ने र यसलाई वैधानिक मान्यता दिइसकेका छन् । कार्बनडाइअक्साइडलाई पचाउन सक्ने क्षमता यसमा अन्य…
‘हेर्नुहोस् ! यो पनि खाद्यान्नकै सवारी हो, हामी यसलाई ‘साइड’ लगाउँदैछौं’
बैशाख १६ गते बिहान ६ बजेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागु भइसकेको थियो । निषेधाज्ञा हुनुअघि नै अधिकांशले काठमाडौं उपत्यका छोडिसकेका थिए । उपत्यकामा भएका मानिसहरु घरभित्रै बस्न बाध्य थिए । सदाझैँ व्यस्त देखिने सडकहरु आज निकै सुनसान देखिन्थे । सडकमा चहलपहल शून्य थियो । अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सवारी साधनहरु सडकमा…
एक हुल जमात यसरी नै गाउँ पसेको भए…
नेपालमा यतिबेला कोरोना महामारीको दोस्रो लहर चलिरहेको छ । ठ्याक्कै एक वर्ष पहिले यतिबेला नेपालमा कोरोना भाइरसको पहिलो लहर चलिरहेको थियो । भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत वर्ष यतिबेला देश बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा थियो । त्यसको ठिक एक वर्षपछि देशको अवस्था झन विकराल हुँदै गएको छ । देशभरका कोभिड…